Ndakanzwa ropa kumhanya muviri wese apa beche richinyerekedza! - Masasi eHarare
DzeBonde Ndakanzwa ropa kumhanya muviri wese apa beche richinyerekedza!
Unongoziva masasi kana uri kubeach hauna basa nezvakawanda asi kana a stranger akauya unotanga kunyara kuti pamwe zvaukapfeka hazviiti, asi this was no stranger ainge arimukomana wandaiyenda naye ku College but tainge tisingataure much until musi uyu. Ndainge ndine 18 years and I think Brian futi was 18 and ndainge ndisati ndambosvirwa ndiri kavirgin hangu, Brian akandinyenga ndokubva ndabvuma and we dated kwegore rese and takaronga kuti tiyende on a road trip. Brian ainge aitengerwa mota nababa vake for his 19th birthday imwe BMW yainge yakanaka, tichiyenda takuudza maparents edu kuti tinenge tichifona all the way and everyday for week ratainge tisipo.
Takasvika kwataigara ndokubva taita book mu cottage yedu tichibva tadzima mafoni edu since kwainge kusina network, taitoita kunge vanhu vayenda pa Island, laptops tainge tasiya kumba saka for one week yese there was no communication with anyone. Ndakawona Brian akamira akanditarisa ndokubva ndamudhonza ndokutanga kukisana ipapo, akarara pabed ndokubva ndarara padumbu pake tese takatarisa mudenga I lokked at him ndikawona akaisa smile ndikaziva kuti uyu ndewangu chete. Akabva ati babe ” I love you, you’re so beautiful” ndikabva ndati kana neni ndinokudawo futi ndichibva ndamuti chimwe chiKiss. Takabva tatanga futi ndikanzwa mawoko ake achiyenda kunoita grab magaro angu achibva atanga kutambisa minyatso yangu and slowly slowly ndakanzwa munhu achichura paside pebhurugwa rangu achisverera matinji angu. Ndakavhunduka paakada kupinza chigunwe mukati mebeche rangu, akabva amira akanditi asi hausikuda here ndikamuti aiwa I want asi kungoti this is my first ndichiri kavirgin, ndakawona smile zvichibva zvanzi kana neni.
Tainge tisati tambosvika kwese uku before kwaingova kukisana chete mostly, ndakabvisa top yangu Brian achibva ashama muromo akatarisa mazamu angu but akabva atanga kuyamwa achiita tudenderedzwa hhhaaaa masasi ndakanzwa ropa kumhanya muviri wese a feeling yandainge ndisati ndambonzwa apa beche richinyerekedza. Ndakawona Brian akuratidza kunakirwa nekuwona ndiri close to musvo, haaa tainge tisati tamboita zvese izvi before, vabereki vedu were Christians vaingotiudza kuti tinofanirwa kumirira kuti titange taroorana kusvikira panguva iyi. Akatanga kundibata mazamu ndokubva akundiyamwa slowly apa minyatso yangu yainge yakamira apa ndaiyita kunakirwa ndichifemera pamusoro ndokutanga kunzwa beche rangu richitota. Ndainge ndakutadza kuzviita control ndokubva ndapushira pasi akaratidza kuvhunduka ndokuramba akatarisa zvese zvandaiyita apa ndainge ndisati ndambowona mboro yake.
Mboro yake yainge iri 11 inches apa yakafuta tsinga dzakati taratara face yake yaita kutsvuka kuita red nezemo chete izvi zvakabva zvaita kuti bhurugwa rangu rinyorove even more. Ndakapfugama ndokubva ndaisa mboro yake mumuromo mangu ndikanzwa munhu achemerera apa kudya kwandaiyita mboro kwaibva kwaita kuti beche rangu ritote even more ndokutanga kuzviisa chigunwe mubeche rangu apa ndichiyamwa mboro chete. Ipapo tese tainge tanzwa nezemo takuchemerera ndipo pakabva pamira Brian ndokuti aihwa imbomira, ndakamuti chii zvikanzi I have to calm down otherwise ndingatunde now handisati ndakuda kutunda. Ndakatanga kuseka ndokubva ndamuti nhasi ndiyo first time yako kudyiwa mboro asi you are worried nekusada kutunda, reply yake akabva atanga kundibata mukati mezvidya umu zvikanzi ndirikuda kukubatawo kuti unakirwe.
Ndakasekerera ndichitendeuka kuti beche rangu riuye paface yake while I continued kuyamwa mboro yake ndikanzwa uchitambisa matinji angundikaita kunge munhu arikunyerekedzwa muviri wese ndipo pandikanzwa rurimi rwako rwuchipinda mubeche rangu ndichibva ndaridza mhere. Brian akambomira ndokunditarisa after ndaridza mhere, ndakamuti continue babe apa ndichichemerera, ndakatanga kuyamwa mboro zvine speed apa yainge ichiwedzera kuwoma, ndakabva ndamira ndokubva ndarara next naye achibva abvunza are you sure urikuda kuti tisvirane, ndichibva ndati “Yesssss”.Brian akatanga kupuruzira beche rangu ndokubva awuya pamusoro pangu apa beche rangu rainge ranzwa nekunyorova, akavhura makumbo angu ndokubata mboro yake achitsvaga buri rebeche rangu, at first zvairwadza ndichibva ndakucheremera kwete kuti zvainaka asi zvaitorwadza.
Brian akamira a bit akabvunza kuti zvirikurwadza here inini ndokubva ndati “Uhmm, imboita slowly babe apa ndainge ndakuchemerera ndichiita noise chaiyo but zvaiyita zvichiita nani nekusvira kwaiyita Brian mboro ichipinda nekubuda. Ndakawedzera kuchemerera louder and louder ndokusverera beche rangu ndokutanga kukwiza kabhinzi apa Brian achikoira chete apa ndainzwa kunge mboro yake irikuwedzera kufuta iri mukati mebeche. Brian akatanga kubata mashoulders angu zvinesimba apa akuita kupomba beche rangu zvairwadza asi zvainaka futi ndakanzwa kudziya mukati mangu inini ndokutanga kuita kunge ndichaputika I can’t hold it anymore ndokubva ndatundawo iye uchipedzawo.Brian akazvomora mboro yake ndokuzvikandira paside pangu apa tainge tichifemera pamusoro apa tichisweta zvisingaite.
Ndakanzwa ropa kumhanya muviri